जलवायु परिवर्तन विरूद्धको लडाइँमा बेजोसले १० अर्ब डलर खर्चेर मुनाफा खोजेका हुन् र ? - Jhilko
जलवायु परिवर्तन विरूद्धको लडाइँमा बेजोसले १० अर्ब डलर खर्चेर मुनाफा खोजेका हुन् र ?
काठमाडौ । वातावरणसम्बन्धी विषयमा प्रायः जसो आलोचना खेपेको अमेजनका मालिक जेफ बिजोसले जलवायु परिवर्तन विरूद्धको लडाइँमा १० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।
विश्वकै सबै भन्दा बढी धनी व्यक्तिको रूपमा समेत चिनिएका जेफले १४ लाख फलोअर रहेको इन्स्टाग्राममा यस्तो पोस्ट गरेका हुन् ।
इन्स्टाग्राममा उनले भनेका छन्“ ‘बजोस अर्थ फन्ड’ले प्राकृतिक विश्वलाई संरक्षण तथा सुरक्षा गर्न खोज्ने वैज्ञानिक, अभियान्ता र एनजीओ जस्ता समूहलाई वित्तीय सहयोग गर्नेछ ।”
अनुमानित १३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्तिको मालिक रहेका बिजोसले भने“ जलवायु परिवर्तन हाम्रो ग्रहको सबै भन्दा ठूलो खतरा हो ।”
गत महिना अमेजनका सयौं कामदारहरूले जलवायु परिवतनसम्बन्धी अमेजनको नीति सही नभएको र अमेजनले जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
अमेजनले आफ्नो वस्तु बेच्न प्रयोग गरिरहेको छोप्ने वस्तु फोहरको थुप्रो बनेर जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई बढाएको आरोप खेप्दै आएको छ । अमेजनले ढोका ढोका वस्तु पु¥याउन प्रयोग गर्ने गाडीले फ्याँक्ने धुवाँले पनि वातावरण बिगारेको आरोप रहेको छ ।
गत वर्ष पत्नीसँग सबै भन्दा महँगो पारपाचुके गरेका बेजोसले यो नयाँ प्रतिष्ठानले यो वर्ष देखि जलवायु परिवर्तनको अभियानमा सहयोग गर्ने बताए । साथै उनले सन् २०४०सम्म १ लाख विद्युतीय ट्रक सामान पु¥याउन किन्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उता न्युयोर्क टाइम्सले यो नयाँ परियोजनाबाट व्यवसायका गुरू बिजोसले मुनाफा बनाउन सक्ने देखिएको जनाएकोे छ । बिजोस अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग विरोधी व्यवहारमा रहेका छन् । बिजोसको यो कोष सबै भन्दा ठूलो परोपकारी कोष भएको देखिएको छ । बेजोसले १० अर्ब खर्च गर्दैमा एक नम्बर धनीबाट दोस्रो भने नहुने टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
चोरले चोर समात भने जस्तो व्यवहार गदै अमेरिका
अमेरिकी प्रथम महिलाले ३.७ करोड भारू बराबरको फुल कुल्चने योजना